SINO-OCEAN MARINE inogona kupa bhaira zvikamu zvakapatsanurwa senge: pombi yemafuta, maxon mota, kamwene keboiler, electrode, murazvo weziso, vharuvhu, chiridzwa, solenoid vharafu, kuvhara uye zvimwe zvikamu zvekusiya.
Kuti usangane nezvinodiwa nevatengi, Sino-ocean Marine stock yakawanda emabhaira ekuparadzanisa zvikamu. Iwo ekuparadzanisa mativi ane chaiwo zvikamu zvemhando uye chitupa akakodzera ako akavimbika!
Kunopisa Stock Chinyorwa:
ZITA & RINOKWANIRA TYPE
Kuyera: 1064-3170KW Press (MIN / MAX): 25 BAR / 30 Bar Mafuta (MIN / MAX): 95kg / h / 283kg / h IP44 220V 60HZ 2012
Unyanzvi Oiri: 34-121kg / h Hunhu hwemafuta: Max 600 cSt + 50 ℃ 220V 1 * 60Hz 6A 440V 3 * 60Hz 10.9kW IP44 2012
Chikamu Chemvura Gauge Stock Chinyorwa:
YEMAHARA FOMU / RATING: SPDT / 250VAC, 5A MAX.PRESS./TEMP: 16kg / cm2 250 ℃ KUSVIRA: IP56
Bhaira Pump Pepa Rondedzero:
ZVINOKOSHA: PP / FPM MAX: 2.3L / H BEI: 8BAR MAX: 1.9L / H BEI: 16BAR IP: 65 AC: 110-240V 50 / 60HZ 21W 28237 BREMEN GERMANY P / N: 10211074 S / N: 102M0006153 MADE IN GERMANY 2/2015
MGO KUSVIRA PUMP
ZVINOKOSHA ZASV250 G8 3F-W20
MS711-4 （MOTOR TYPE）
T0710403 （MOTOR TYPE）
MS712-4, MOTORI TYPE
FEDZA MVURA POMP
SHINYA SHINYA MB 32 04S
PENYA SHINYA TSH50A
QHD SINO-OCEAN MARINE stock inoverengeka inoisa chaiyo nyowani nyowani BOILER SPARE ZVIMWE, zvese zvakagadzirwa nevane mukurumbira venyika vagadziri, uye vanopupurirwa nekutariswa kwechikepe.
Nezve BOILER SPARE PARTS, tinogona kupa zvinotevera zvishandiso mudura. Iyo michina ine chaiyo zvikamu zvemhando yepamusoro & chitupa zvakakosha kune yako akavimbika！
Pashure: Sewege kurapwa chirimwa
Zvadaro: Plate kupisa exchanger